Indlela yokuhlawula kwiwebhusayithi yethu ngokudluliselwa kweBhanki ye-BRIFT?
Iyintoni intlawulo ekhawulezayo? Ukuzonwabisa, ukukhawuleza nokukhuseleko kokusetyenziswa
I-SWIFT yokuhlawula imali yokudluliselwa kwemali phakathi kwamabhanki abantu kunye namashishini angomthetho ngokusebenzisa inethiwekhi yentlawulo ye-SWIFT.
Amalungu othungelwano okwangoku angaphezulu kwee-10 zeenkampani zemali kwii-210 kumazwe. Oku kukunika amandla okuthumela ngokukhawuleza iintlawulo zehlabathi ngamazwe ahlukeneyo kumazwe amaninzi athuthukile.
Indlela yokuhambisa imali nge-SWIFT kwikhompyutha?
Iibhanki ezininzi zinika amandla okuthumela i-SWIFT yamazwe ngamazwe kwi-akhawunti yakho yeBhanki ngaphandle kokushiya ekhaya.
Ukuthumela imali kwelinye ilizwe, ngenisa i-akhawunti yakho yeBhanki ("i-intanethi yebhanki", "umxhasi we-intanethi") kwiqela lokudluliselwa ngamazwe, kwaye uzalise ulwazi olufunekayo malunga nommkeli, uya kuba lula ukuthumela imali ngaphandle iindleko zommkeli.
Kwimeko yokubukeka kwemibuzo, ungabiza iBhanki yakho kwaye ufumane ingcebiso engcali yengcali.
Indlela yokuthumela imali ngqo kwiBhanki?
Naliphi na iBhanki kwilizwe lakho livumela ukuhambisa i-SWIFT. Ukutyelela kwiBhanki kwaye uxelele injongo yakho yokwenza umthengi kwaye unikezele ngeBhanki ulwazi malunga nommkeli ngqo kwi-Bank. Abasebenzi beBhanki baya kwenza kwaye bazalise yonke into, inkqubo yokuthengiselana ayiyi kuthatha imizuzu engaphezu kwe-15.
Ingaba yintoni idatha efunekayo yomhlawuli weentengiselwano?
Ukudlulisa imali phesheya kwamanye amazwe umthengi ufuna ukufumana iinkcukacha ezipheleleyo ze-SWIFT ngokomzimba okanye kubantu abasemthethweni, apho ukuthunyelwa kuyothunyelwa.
- igama leBhanki elixhamlayo (umzekelo I-BANGKOK BANK YOLUNTU YOLUNTU CO..LTD)
ikhowudi kwinkqubo ye-SWIFT (umzekelo BKKBTHBK )
inombolo yeakhawunti yommkeli
- igama kunye nefayili yommkeli
I-SWIFT ifanelekile ukuthumela ukudluliselwa kwezi zilandelayo:
- Ukusebenza kweemali ezinkulu kumazwe angaphandle kunye nokunciphisa intlawulo yeKhomishini.
- Ukuthenga izitolo ze-intanethi ngaphandle.
- Intlawulo yeenkonzo zeenkampani zangaphandle.
- Ukudluliselwa kweemali ezinkulu kubantu ngabanye ngeenjongo.
Nangona kunjalo, ku funeka kuqatshelwe ukuba yonke imisebenzi eyenziwa kwinkqubo ye-SWIFT ikhuselekile ngokupheleleyo.
Zonke, kuquka imali, uxanduva lwayo, ithathwa yinkqubo ngokwayo. Ukuhlanganiswa kweziganeko ezinengqiqo kunye nezemvelo azivumeli nayiphi na utshintsho kwi-transit, ngaphandle koko, ukubethelwa okhethekileyo kwenza kube nzima ukuguqula umyalezo ngexesha lokudluliselwa kwe-SWIFT.
Ngaphandle komthengi kunye nommkeli, akukho mntu unokufunda okuphakathi kwayo.
Isantya sokuthumela i-SWIFT phesheya?
Ngokuqhelekileyo imali iya kufika kummkeli kwiiyure ze-24 (iintsuku zokusebenza). Ixesha elide lenkqubo liza kuthatha i-3-5 iintsuku ukuba zibe kwi-akhawunti yommkeli.
Ukufumana iinkcukacha ezingakumbi malunga nokuhlawulwa ngokukhawuleza kwe-oda lakho kwiwebsite yethu, nceda Qhagamshelana nathi